Iinkqubo ezi-5 zasimahla ze3D | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iinkqubo ezi-5 zasimahla ze3D
Iilayisensi zeenkqubo ezaziwa kakhulu ze3D kwintengiso namhlanje azibizi ngexabiso namhlanje. Ngethamsanqa, kukho iinkampani ezimbalwa (ezinkulu okanye ezincinci) kwihlabathi liphela ezithanda ukwabelana ngeenkqubo abaziphuhlisileyo, kunye neenkampani ezinobuhlakani ezibonelela ngeendlela zokulinga simahla kwiinkqubo zabo ezihlawulelweyo.
Ukugcina ixesha kunye nomzamo, ndibonisa Uluhlu olufutshane lweenkqubo ezisimahla ze3D ukukhuphela namhlanje ukuba uyafuna. Ke ukuba ungumculi we-3D okanye ufuna ukuqala, eli nqaku liza kuba lunomdla kuwe.
2 Isitudiyo saseDaz
3 UHoudini Ufunda
4 Inguqulelo yesilingo yeMaya kunye ne3ds Max
Ukuba ufuna ukuthatha nzulu nge-3D kwaye uyonga ukuze ukwazi ukuhlawulela iphepha-mvume lenkqubo ethile yentlawulo, nge Blender unethamsanqa. I-Blender yindawo yasimahla kunye nevulekileyo yemodeli ye-3D kunye nenkqubo yokudala, Iyafumaneka kuzo zonke iinkqubo ezinkulu zokusebenza (windows, mac osx kunye ne-linux).
Eqaliswe ngumsunguli we-Blender Foundation, iTon Roosendaal, ngo-2002, i-Blender namhlanje iyona sixhobo esikhulu esivulekileyo semodeli ye-3D kunye nokudala. Abenzi bayo bahlala besebenza kuphuhliso lwayo, kodwa ngokusebenzayo Unokwenza nantoni na enxulumene ne-3D ngale softwarekubandakanya imodeli, ukubhala umyalezo, oopopayi, ukunikezela kunye nokudibanisa.
Isitudiyo saseDaz Yiyo ulwenziwo, ukubonisa kunye nesixhobo sopopayi samanani e3D evumela amagcisa onke amanqanaba ezakhono ukuba enze ubugcisa bedijithali kusetyenziswa abalinganiswa bokwenyani, izilwanyana, izixhobo, izithuthi kunye nemeko-bume.
Nge-Daz Studio, ungenza oonobumba be-3D ngokwesiko kunye nee-avatars, uyilo lweemeko ezibonakalayo, ukuvelisa izinto zoyilo ze-3D, nokunye okuninzi. Inguqulelo yamva nje yeDaz Studio 3d ihlala inexabiso le- € 249.00, kodwa okwangoku ungayifumana ikhutshelwe simahla kwiwebhusayithi yenkampani ephuhlise le nkqubo.
Ukuba unomdla kubugcisa bemodeli yedijithali, zama inkqubo ye-3D Umkroli, Iphuhliswe yiPixologic. Ukugqibelela kuwo onke amanqanaba ezakhono, isoftware sisiqalo esihle sabasebenzisi abatsha kuqeqesho, kwaye amagcisa eCG anamava aya kufumana kule software indlela ekhawulezayo nelula yokuqonda iikhonsepthi.
I-Sculptris isekwe kwi-Pixologic's ZBrush, the umfanekiso oqingqiweyo wedijithali (umzekelo) esetyenziswa kakhulu kwimarike yanamhlanje. Ke xa ukulungele ukugqithela kwinqanaba elilandelayo leenkcukacha, izakhono ezifundwe kwi-Sculptris zinokusetyenziswa ngqo kwi-ZBrush.
Houdini Yiyo Isixhobo sopopayi se3D kunye neziphumo ezibonakalayo, isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso weendaba, ngakumbi ifilimu. Kwinguqulelo yayo enexabiso eliphantsi kubiza "nje" intwana engaphantsi kwe- € 2000.
Nangona kunjalo, abaphuhlisi benkqubo, iZiphumo zeSoftware, besazi ukuba iindleko zenkqubo azifikeleleki kumntu wonke, nikela inguqulelo yoMfundi simahla. Ngale nto unokufikelela kuwo onke amanqaku ohlobo olupheleleyo ukuphuhlisa izakhono zesoftware yakho kunye nokusebenza kwiiprojekthi zobuqu. Le nkqubo yenzelwe iinjongo ezingezozorhwebo kunye nokufunda.
Inguqulelo yesilingo yeMaya kunye ne3ds Max
Iinguqulelo zovavanyo ze maya kunye Ii-3Ds Max abakhululekanga ngonaphakade. Kodwa ukuba ungumculi we-3D ofuna ukutyala imali kamva kwinkqubo okanye ungumfundi ofuna ukuyazi kakuhle le nkqubo, inkampani enkulu iAutodesk kufanelekile ukuyazi. unikezela ngesilingo seentsuku ezingama-30 kuyilo lwayo kunye neenkqubo zokumodela kwi3d, 3D Maya nakwi3ds Max.
Le miboniso mibini ziintandokazi kwimidlalo bhanyabhanya nakwimidlalo yevidiyo. Zisetyenziselwa uninzi lweeopopayi eziphambili kunye nezitudiyo ezizezona zibalulekileyo kwihlabathi liphela, kwaye ukuthenga ezi nkqubo kungakubiza ubuncinci i- € 3,675. I-Autodesk iyazi ukuba zombini ezi mveliso zilutyalomali olukhulu kwaye ke zinikezela abathengi bazo ithuba lokuzama ngaphambi kokuba bathenge ukubona amathuba abawabonelelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iinkqubo ezi-5 zasimahla ze3D
IBhetelehem Aula Carmona sitsho
Kudala ndikulandela kwaye ndibhalisile ngeposi. Inyani yile yokuba awuvumeli iqonga le-pinterest, kuba maninzi amanqaku akho anomdla kum kwaye ndingathanda ukukwazi ukugcina ukufikelela kuwo kamva.
Phendula uBelén Aula Carmona
Molo uBelén Aula Carmona, ngaphakathi kweposi unamaqhosha entlalontle kwaye elinye lawo linikezelwe kwiPinterest.
Ukuba usifunda kwiselfowuni yakho kwaye ungene kwiFacebook, emva koko layisha ingxelo yamaNqaku akhawulezileyo kwaye iqhosha alizukuvela. Kukweso sizathu.
Umbuliso kunye nombulelo wokufunda!
Uyokutsho yenza ii-icon ezikwi-Intanethi sitsho
I-Studio ye-DAZ sele inendawo engaphezulu okanye engaphantsi kweminyaka eli-10 kwintengiso. Ndiyibukele ikhula, ndiye ndayazi kwaye ndiyayithanda le software. Ngokoluvo lwam ngazo zonke izicelo ezikhoyo phaya, i-DAZ Studio ineyona ndawo isebenzayo kunye neyona ndlela elula kakhulu yomsebenzisi. Kusengqiqweni, inokwenziwa ngokwezifiso ii-newbies (kunye nepro) ezinobubele kunye ne-100% enokwenziwa ngokwezifiso ngeempawu ezinkulu.
Ungashenxisa iifestile ngeenxa zonke, ubungakanani kwakhona, kwaye uzicime ukugcina indawo (kunye nentloko). Masijongane nayo, iyothusa, kuba uninzi lweeapps luyinkimbinkimbi ngokumangalisayo ukusebenzisa. Kwaye i-DAZ Studio ilula kwaye isimahla!
Phendula i-laserverde700Juan | yenza ii-icon ezikwi-Intanethi
Itheyori encinci yemibala esetyenziswe kwizikrini
UCoca-cola ubhiyozela uNyaka oMtsha wenyanga waseVietnam